Kantipur-भारतमा जीएसटी कार्यान्वयन - कान्तिपुर समाचार
असार १८, २०७४ कमलदेव भट्टराई
नयाँ दिल्ली — नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतमा शुक्रबार मध्यरातदेखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू भएको छ । भारत सरकारले मध्यरात १२ बजे संसद्को विशेष सत्रमार्फत जीएसटी कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय कर प्रणालीमा ७० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो कर परिवर्तन हो । उक्त कर कार्यान्वयन गर्दै भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीले यसलाई ऐतिहासिक घटनाको संज्ञा दिए ।
यसको कार्यान्वयनका लागि राज्य सरकारहरूको समन्वय र सहयोग अपरिहार्य छ जुन सहज छैन । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले मन्त्रीहरूलाई विभिन्न राज्यहरूमा खटाइसकेको छ । एक जना मन्त्रीलाई कम्तीमा १०० वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरिएको छ । आम मानिसलाई यसले निकै फाइदा पुग्ने सन्देश सरकारले दिइरहेको छ ।के हो जीएसटी ?
केन्द्रले लगाउने करलाई सीजीएसटी, राज्यकोलाई एसजीएसटी र दुईभन्दा बढी प्रान्तमा बिक्री भए आईजीएसटी भन्ने गरिएको छ । यसलाई उपभोगका आधारमा करको बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्य कर खारेज भएर एकीकृत जीएसटी लागू भएपछि भारतमा केही वस्तु सस्तिएका छन् भने केही महँगिएका छन् । के के सस्तो भयो ?
आधारभूत उपभोग्य सामग्रीमा यसअघि लाग्दै आएको केही कर हटाइएको छ भने केहीमा घटाइएको छ । अधिकांश उपभोग्य सामग्रीमा शून्य वा ५ प्रतिशत मात्रै जीएसटी लगाइएको छ । जीएसटी लागू भएपछि सस्तो हुने सामानहरूमा पाउडर दूध, दही, बटर मिल्क, मह, चिज, चिया, गहुँ, चामल, पिठो, खाने तेल, चिनी, अचार, सस, मिनरल वाटर, बिस्कुट, नुहाउने साबुन छन् । यसैगरी टाउकोमा लाउने तेल, नेपकिन पेपर, मट्टीतेल, ग्यास, अगरबत्ती, नोटबुक, कलम, स्कुल ब्याग, कार्बन पेपर, प्रिन्टर्स, डाइबेटिज तथा क्यान्सरका औषधिहरू, अप्रेसन गर्ने सामानहरू, चस्मा, सिल्क, ऊनी धागोलगायतका सामान पनि सस्तिएका छन् । तरकारी तथा फलफूल, पाउरोटी, आटा, जुस तथा विद्युत्मा पहिलेको करको दरमा परिवर्तन गरिएको छैन् ।महँगिएका सामान
यो कर प्रणालीले सिनेमा क्षेत्रमा भार थपिदिएको छ । यसको विरोधमा तमिलनाडुका सिनेमाहलहरूले पहिले नै हडतालमा जाने बताइसकेका छन् । अहिले टेलिकम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब जीएसटीअन्तर्गत त्यो बढेर १८ पुगेको छ । यसले टेलिफोन कल महँगिएको छ । मोबाइल फोनहरूको मूल्य एकदमै बढेको छ । अहिलेको भन्दा झन्डै ५ प्रतिशत विन्दुले बढी कर तिनुपर्ने भएकाले भारतमा मोबाइल सेटको मूल्य बढ्नेछ । मेडिकल इन्स्योरेन्सको कर १५ प्रतिशतबाट बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । चक्लेट, सेम्पो, फेसक्रिम, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, फर्निचर तथा घडीहरूको करलाई २६ बाट २८ प्रतिशत पुर्‍याएका कारण ती सामानहरू महँगो हुनेछन् । त्यसैगरी होटलहरूको करमा पनि वृद्धि भएको छ । अब भारतमा होटलको बसाइ महँगो हुनेछ । तर एक हजार रुपैयाँभन्दा दैनिक कम तिर्नुपर्ने होटलको दाम भने सस्तिनेछ । यसमा शून्य प्रतिशत जीएसटी लाग्नेछ । व्यवसायी तनावमा